Lelee Usoro Ọdịnaya gị site na iji Google Search Console | Martech Zone
Tọzdee, Machị 5, 2009 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
Ọtụtụ ndị mmadụ maara Njikwa Nchọta Google maka ntinye saịtị na ikwenye robots faịlụ, Sitemaps na ndenye aha. Ndi mmadu ezughi oke iji nyocha onu ogugu iji nweta uzo doro anya maka ọdịnaya saiti ha.
Na-agagharị na Statistics> Top Search Ajụjụ ị ga-ahụ ntanetị data dị egwu:
N'akụkụ aka ekpe nke okporo bụ Top Search gbara ajụjụ maka blọgụ gị. Nke a bụ ndepụta nke isiokwu dị elu ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu yana ọnọdụ nke post ma ọ bụ ibe gị na nsonaazụ.
N'akụkụ aka nri nke okporo bụ okwu ndị dị adị pịa-site na yana ha pịa-site na ọnụego (CTR). Nke a bụ ozi pụtara ìhè!
Ihe ndị a bụ isiokwu ịchọrọ ka ụlọ ọrụ gị, saịtị ma ọ bụ blog gị gosipụta? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịchọrọ ịtụgharị uche na ọdịnaya gị wee malite ịmalite ya nke ọma.
Ọ bụrụ n ’etinyere gị nke ọma na mkpụrụokwu akọwapụtara mana ntaneti ịpị ọfụma adịghị mma, ịkwesịrị ịrụ ọrụ na Post Post gị na post post na nkọwapụta meta). Nke a pụtara na ị nweghị isiokwu na ọdịnaya na-akpali akpali - ndị mmadụ na-ahụ njikọ gị mana ịpịghị na ya.
Nhazi nke ọma na nsonaazụ ọchụchọ adịghị ọgwụgwụ nke ọrụ gị. Gbaa mbọ hụ na edere ọdịnaya gị nke ọma na ndị mmadụ pịa ya dị mkpa karịa!
Tags: content Marketingndị webmasters googleelu peejinyocha ọchụchọ kacha eluwebmasters
Blogger Isi Iyi
Ọ gaara amasị gị ka ị banyekwuo nkọwa banyere otu esi eji ozi ahụ. Enyemaka GW abụghị ihe niile na-enyere aka.